Amerika Avaratra · Novambra, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Amerika Avaratra · Novambra, 2016
Tantara mikasika ny Amerika Avaratra tamin'ny Novambra, 2016
Taona 2021, Tratran'ny Krizim-Pifandimbiasan-Toerana Ny Repoblikan'i Trump
Etazonia 30 Novambra 2016
Ahoana no mety fitateran'izao tontolo izao ny firenena fantatra fa Etazonian'i Amerika ankehitriny ao anatin'ny dimy taona? Tranga iray mety hiseho ity manaraka ity.
GV Face: Filoha Obama, Fotoana Izao Hamindranao Fo An'i Oscar López Rivera Izao [Mivantana Amin'ny 6 Hariva GMT Amin'ny 23 Nov]
Etazonia 23 Novambra 2016
Iray amin'ireo gadra politika migadra ela indrindra eto amin'izao tontolo izao izy. Efa nandany ny antsasaky ny fiainany tany am-ponja izy.
Mety Hampidi-doza an'i Iran Ny Fifanakaikezan'ireo Mety ho Mpikambana Kabinetran'i Trump Amin'ireo Mpanandratra Olon'ny MEK
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Novambra 2016
Mety hiteraka fiovan-kevitra mampatahotra an'i Etazonia tarihin'ny filoha voafidy Donald Trump manoloana an'i Iran ny fahitana ny fifanakaikezan'ireo olobe sasantsasany ao aminy amin'ireo vondrona mpitolon'ny MEK.
Etazonia 18 Novambra 2016
Fanapahankevitra 2016: Fandanjàna Fahavoazana
Amerika Latina 17 Novambra 2016
"Toa toy ny hitsimbadika ireo fandrosoana ara-politika azo fony fitondràn'i Obama , satria nampanantena i Trump ny hanafoana ny fifanarahana nifanaovana tamin'i Kiobà ary hamerina hitady marimaritra momba ireo fifanaraham-barotra malalaka izay azo antoka fa hahakitika" ireo firenena Amerikàna Latina.
Etazonia 14 Novambra 2016
Eoropa Afovoany & Atsinanana 14 Novambra 2016